DOWNLOAD NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA MAKA TP-LINK TL-WN822N - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Ịwụnye ọkwọ ụgbọala TP-Link TL-WN822N
Onye na-agbachitere ụlọ ọrụ bụ onye a na-ahụ maka ahịa na kọmpụta kọmputa na ngwá ọrụ dị iche iche. Ha na-etinye aka na mmepụta nke ụmụ oke, keyboard, ndị ọzọ na-achịkwa, usoro okwu, ekweisi na ngwaahịa ndị ọzọ. Ngwaọrụ PC na-achọkarị ndị ọkwọ ụgbọala arụnyere, ọ bụghị naanị otu ụgbọ ụkwụ na-agba ọsọ. Ka anyị kwuo maka ịchọpụta na ịbịnye faịlụ maka ngwaọrụ ndị a site na onye nrụpụta n'elu ahụ na nkọwa zuru ezu.
Download ndị ọkwọ ụgbọala maka wiil ndị na-ahụ maka egwuregwu
Izizi, onye nchịkwa ahụ ga-arụ ọrụ naanị ma ọ bụrụ na kọmputa ahụ soro software. Mgbe ahụ, nhazi ahụ ga-aga nke ọma, ọ gaghị enwe nsogbu ndị ọzọ na arụmọrụ nke igodo ma gbanwee. Ajuju nke ụzọ anọ dị, site na usoro nke ịchọta ma na-ebugharị ọkwọ ụgbọala.
Nzọụkwụ 1: Onye Mgbachitere Mgbasa Ozi
Nke mbụ, anyị na-atụ aro ka ị kpọtụrụ saịtị ọrụ ahụ. E nwere ozi gbasara ngwaahịa niile na ngwaahịa archival. Na mgbakwunye na nkọwapụta na njirimara ịmara nwere njikọ na ngwanrọ na akụrụngwa. Nbudata dị ka ndị a:
Gaa na onye na-akwado onye na-akwado ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ
Na ihe ọ bụla dị mfe, gaa na isi nke ụlọ ọrụ ahụ. Na ya ị ga-ahụ akara na ngalaba dị iche iche, ebe ị kwesịrị ịpị "Ndị ọkwọ ụgbọala".
Otu panel nwere ụdị ngwaahịa dị. N'ebe a, kpoo òké gị "Ndị njikwa ihe egwuregwu" ma họrọ "Egwuregwu wiil".
A na - ekebanye aha nke ụdị abụọ n'ime abụọ - ugbu a na archive. Ebe ọ bụ na enweghị ọtụtụ ngwaọrụ, ọ dị mfe ịchọta nke gị. Chọta ya ma gaa na ibe ozi.
Na teepu meghere ị ga-ahụ nkọwa, njirimara na nyocha banyere ngwaọrụ ahụ. Ikwesiri ịkwaga "Download".
Ọ na-anọgide na ịhọrọ nsụgharị nke sistemụ arụmọrụ na ibudata faịlụ kwesịrị ekwesị.
Mepee data ebudatara site na ebe nchekwa ọ bụla na-agba ọsọ "Setup.exe".
Hụkwa: Archivers maka Windows
A ga-edozi nrụnye na-akpaghị aka. Mgbe ịmechara usoro a, ị nwere ike ịmalite ịmalite ịnya ụgbọ ala ma nwalee ya n'ọgba ọsọ ma ọ bụ simulators dị iche iche.
Usoro nke 2: Ngwa ndị ọzọ
Maka ụfọdụ ndị ọrụ, nhọrọ mbụ dị ka ihe siri ike ma ọ bụ ihe na-adịghị mma. Anyị na-akwado ha ka ha chọọ enyemaka site na ngwanrọ ndị ọzọ nke ga-eme ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ omume niile na akpaghị aka. Naanị ị ga-agba ọsọ nyocha nke PC gị ma họrọ ọkwọ ụgbọala ịchọrọ ịwụnye ma ọ bụ melite. E nwere ezigbo ndị nnọchiteanya nke ngwanrọ dị otú ahụ. Gụkwuo banyere ha na ihe ndị ọzọ na njikọ dị n'okpuru ebe a.
Na mgbakwunye, saịtị anyị nwere ntụziaka zuru ezu banyere iji DriverPack Solution. N'okpuru ebe a, ị ga-ahụ ntụziaka zuru ezu banyere isiokwu a ma jikwa ụdị isi dị mkpa ka a rụọ.
Onye ọ bụla na-arụ ọrụ egwuregwu ejikọrọ na kọmputa nwere njirimara nke aka ya, nke na-enye ya ohere ijikọta ya na usoro. Usoro a pụrụ iche na-enyocha ndị ọkwọ ụgbọala site na ọrụ ọkachamara. Ngwọta dị otú ahụ ga-enye ohere ịchọta ngwanrọ ọrụ ma wụnye ya n'enweghị nsogbu ọ bụla. Ntuziaka zuru ezu banyere isiokwu a na-egosi n'isiokwu ọzọ site n'aka onye edemede anyị.
Usoro 4: Ụdị Ọrụ Windows
Maka ndị nwe ụlọ ọrụ Windows, enwere usoro ọzọ dị mfe maka ịchọta na ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala, nke ga-aba uru ma ọ bụrụ na iji aka tinye ngwaọrụ site na nhọrọ kwesịrị ekwesị. Otu n'ime usoro nke usoro a bụ naanị nbudata ngwanrọ sitere na netwọk ejikọrọ ma ọ bụ site na Ịntanetị. A choro onye ọrụ iji mee ihe ole na ole. Gụ banyere ya na isiokwu dị n'okpuru ebe a.
Ịchọta na ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka ụgbọelu ịgba chaa chaa nke ihe ọ bụla si na ụlọ ọrụ Defender bụ ihe dị mfe. Ọ dị mkpa ịhọrọ ụzọ kachasị mfe ma soro ntuziaka ndị dị na isiokwu anyị.